Ụdị na mkpirisi maka mmiri | Bezzia
Di na Nwunye
Ụdị na mkpirisi maka mmiri
Maria onyekwere | 20/06/2022 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi
Ị ji n'aka na maka ọtụtụ n'ime gị ọkụ ọkụ mere ka ị wepụ uwe mwụda gị n'ime ime ụlọ. Ma ọ bụ na uwe okpomọkụ a bụrịrị ezigbo ihe ọzọ iji mezue uwe anyị n'agbanyeghị na anyị agbanwebeghị oge. Ị chọrọ echiche ịmepụta Uwe nwere obere uwe bermuda maka mmiri?
Enwere ike ịmegharị obere mkpirisi Bermuda ka ọ bụrụ ụdị dị iche iche. Ha ogologo ikpere na-eme ka ha bụrụ ihe ọzọ kwesịrị ekwesị na ọnọdụ ụfọdụ karịa mkpụmkpụ. Na-akwụsịghị ịbụ uwe dị mkpụmkpụ na nke ọhụrụ iji luso oke okpomọkụ ọgụ.
Ị nwere ike ịmepụta uwe na obere mkpirisi iji gaa ọrụ, ka ị nwee mmasị n'ehihie ntụrụndụ gị ma ọ bụ gaa nlegharị anya na ezumike ọzọ. Bermuda mkpirisi bụ uwe na-agbanwe nke ukwuu nke ị nwekwara ike ịhụ na ụdị na agba dị iche iche, ebe ndị na-anọpụ iche na agba kacha ewu ewu.
Kedu ka m ga-esi jikọta obere mkpirisi?
Ị na-achọ anya na obere mkpirisi ya bụ dabara adaba maka ịga ọrụ? Otu elu na uwe elu nke nwere eriri iji akara n'úkwù na-aghọ ezigbo ndị mmekọ maka nke a. Mgbe ahụ, naanị ị ga-ahọrọ ngwa ndị kwesịrị ekwesị, akpụkpọ ụkwụ na-acha uhie uhie na onye na-azụ ahịa, dịka ọmụmaatụ.
Nhọrọ ọzọ ị ga-atụle bụ suut na mkpirisi Ọ bụghị ha niile dị mfe iyi ma ha nwere ike inye gị ọtụtụ egwuregwu site n'inwe ike iji uwe ha ma ọnụ na iche iche. Nke a n'oge okpomọkụ nzọ na suut na-egbuke egbuke na agba, ha bụ a na-emekarị!
Atụmatụ ndị a na-amụba ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta uwe na uwe mkpirisi nkịtị na enweghị mmasị. Oge okpomọkụ a na-ejikọta obere mkpirisi na ihe ọkụkụ na uwe elu ga-abụ nke kachasị ugbu a. Ma ọ bụ na ị gaghị agahie ụzọ ijikọta uwe mkpirisi gị na a akwa owu na ntule ndịiche. Ndị ribbed, dịka ọmụmaatụ, bụ kpochapụwo nke na-adịghị adaba n'iji ya eme ihe.
Ị si na uwe mwụda ma ọ bụ na ị na-agba chaa chaa na uwe mwụda?
Onyonyo - @fannyekstrand, @Nwanyi_ocha, @IGIHE, @thestylertalkercom,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Ụdị na mkpirisi maka mmiri
Kitchens nwere ihe ngosi: ihe nri nri gị n'anya
Manicure set - kedu ihe ọ bụla bụ maka?
Akwụkwọ Akụkọ Bezzia.com
Soro Bezzia n'efu ma nata ọdịnaya anyị niile na email gị
Onwe Enyemaka Onwe
Ndị nne Taa
Mụ nwoke Stylish
Bụrụ onye na - ede akwụkwọ